Isa iyo Rust programming mutauro paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isa iyo Rust programming mutauro paLinux
Ngura kana ngura-lang Iyo chaiyo yemazuva ano uye yakavhurwa sosi yekuronga mutauro, pamwe nekuyambuka-chikuva, nekukurumidza uye yakagadzirirwa kutsiva C neC ++ Yakagadzirwa neMozilla uye ine yepamusoro-soro kubvisirwa kufadza avo vanobva kuC # uye Java futi. Uye izvi hazvisi zvega, tinogona kuona zvakawanda zvinonakidza zvinhu zvisingaoneke mune mimwe mitauro yekuronga, senge zero mutengo unosemesa, mafambiro emitambo, chengetedzo yekurangarira, yakaderedzwa nguva yekuuraya, nezvimwe.
Ngura inoshandiswa nevamwe vakuru seCanonical, CoreOS, Coursera, Dropbox, uye zvirokwazvo Mozilla pachayo. Kuve multiplatform isu tinayo inowanikwa yeGNU / Linux uye mune ino chinyorwa tichaenda kukuratidzira nhanho nhanho uye nenzira yakapusa maitiro ekuiisa pane yako yaunofarira distro. Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvakawanda nezve Rust, unogona kuwana iyo nzvimbo yepamutemo kwaunowana akawanda emabhuku uye zvinyorwa mune izvi ... Chinhu chekutanga kuita gadza Ngura kurodha pasi iro rinodiwa pasuru medu, nekuti izvi tiri kuzoshandisa curl:
Nezvo isu tinowana saiti uye nekuita iyo script. Nhevedzano yesarudzo ichavhura kwatiri mune yedu terminal uye isu tinofanirwa kupindura nenzira kwayo. Unofanira tinya 1 kuti uenderere mberi nekumisikidza nezvakakanganisa, inova ndiyo tsika yakanyanya kunaka kune vakawanda. Kana iwe uri nyanzvi, unogona kushandisa 2 kugadzirisa iyo yekuisa ...
Mushure meizvozvo, ichaburitsa akateedzana ruzivo nezve iyo yekumisikidza, uye kana yapera isu tinokwanisa gadzira goko redu ikozvino kutanga kushanda:
Uye isu tinogona kutanga kuishandisa. Semuenzaniso, kana iwe uchida ona vhezheni yacho izvo zvawakangoisa uye wotarisa kuti zvese zvakanaka:
Kubva pano iwe unogona kutanga nemapurojekiti ako muRust. Ndinovimba ndakubatsira kana kuti ndakuita kuti uzive mutauro uyu kana wanga usati wauziva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Isa iyo Rust programming mutauro paLinux
Mhoro waigona kundibatsira ini ndingaisa sei ngura mune iyo PATH nharaunda inoshanduka zvachose ini ndinoshandisa ubuntu
FFmpeg yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 4.0
Ungachinja sei mudzi password muFedora